एक दशकभन्दा बढी समय घर र स्कुलको दूरीमात्र गरिरहँदाको क्षण पट्यारलाग्दा हुँदा हुन् । त्यसैले अधिकांश विद्यार्थीले यो क्षणलाई याद्गार बनाउँथे । कोही आगामी कक्षाका लागि अब्बल तयारीमा जुटिरहेका हुन्थे, त कोही रमाइरहेका हुन्थे नयाँ सिकाइमा । यतिबेलै हो, उनीहरूले चंगा मन लिएर सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने, नयाँ योजना र सपनाहरू बुन्ने ।
तर, यो साल त्यस्तो भइदिएन । विश्वभर महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड–१९ संक्रमणको सिकार नेपाल पनि बन्यो । कोरोना संक्रमणको डर बढ्दै गएपछि चैत्र ६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको परीक्षा स्थगित गर्ने–नगर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले चैत्र ४ गते नियमित तालिका अनुसार नै सञ्चालन हुने बताएका थिए । उच्च सतर्कतासाथ एसइई सञ्चालन गर्ने परीक्षा बोर्डले बताएको थियो ।
तर, परीक्षा सञ्चालन हुने अघिल्लो दिन मन्त्रालयले सूचना जारी ग¥यो– ६ गतेबाट सञ्चालन गर्ने भने भनिइएको एसई परीक्षा स्थागित ।
यो सूचनाले परीक्षाका लागि पूर्ण तयार भएका ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ जना विद्यार्थीलाई विचलित बनायो ।
अन्योलमा विद्यार्थी, चिन्तामा अभिभावक
भक्तपुरस्थित नालोन्दा विद्यामन्दिर, सानोठिमीका विद्यार्थी आर्याजंग बस्नेत चैत्र ५ गते भोलिपल्ट परीक्षा हुने विषयको पूर्ण तयारीमा थिए । तर, अचानक एसइई स्थगित भएको सुनेपछि उनको अनुहार निन्याउरो भयो । अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित भएको थाहा पाएपछि उनी अलमलमा परे । ‘सरहरूले यो बेला स्वास्थ्य महत्वपूर्ण कुरा हो, एसइईको चिन्ता नगरौं भनेर सम्झाउनु भयो । तर, हामी सबै साथीहरू चिन्तामा थियौं, तयारी खेर जान्छ भनेर,’ आर्याजंगले भने । स्थगित भएको दुई दिनपछि उनले पुनः पढेका कुरा दोहोर्याउन थाले । शिक्षकहरूमार्फत् फेसबुकमा ग्रुप बनाएर अनलाइनबाटै छलफल हुन थाल्यो । ‘तर, अनलाइनमा कहिले नेटको समस्या हुने र समय खेर मात्र जाने । सोचेजसरी पढ्न पनि नसकिने,’ उनले समस्या सुनाए ।
एकातिर कोरोना संक्रमणको डर, अर्कोतिर गुम्सनुपर्ने लकडाउन । आर्याजंगलाई मस्तिष्कमा अल्झिरहेको एसइई परीक्षा यतिबेला बोझिलो बनेको छ । भन्छन् ‘परीक्षा कहिले हुने हो थाहा छैन । डरले गर्दा सोचेजसरी पढ्न पनि सकिन्न ।’
सोही स्कुलमा पढ्ने रीदिक्षा अधिकारी एक–दुई दिनपछि पुस्तक पल्टाउँदा बिर्सिएको जस्तो हुने बताउँछिन् । ‘पढिमात्र रहन पनि सकिन्न । एकछिन मोबाइल चलायो भने बा–आमाले पढ्न कर गर्नुहुन्छ,’ रीदिक्षा बताउँछिन् ।
सोलुखुम्बुको सोताङस्थित सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रा तेजिना बस्नेतको पनि यसैपालि एसइई थियो । चैत्र ५ गते प्रवेश पत्र लिएर घर आएपछि साँझ ८ बजेमात्र परीक्षा स्थगित भएको थाहा पाइन् । अहिले उनले पहिले जसरी परीक्षा तयारी गर्न सकिरहेकी छैनन् । ‘दिउँसोभरि काम गनुपर्छ । कोरोनाको डरले पनि पढ्ने जाँगर हराएको छ । अब एसइई दिन पहिलेजस्तो सहज हुँदैन जस्तो लाग्छ,’ उनी सुनाउँछिन् । राजधानीमा जस्तो तेजिनाको गाउँमा नेटको पहुँच छैन । उनको अनलाइन कक्षा त के बिदापछि कुनै शिक्षकसँग सम्पर्क समेत हुन सकेको छैन । भन्छिन्, ‘पढ्न अहिले निकै असहज भइरहेको छ ।’
नवोदय शिशु सदन हेटौंडाकी प्रसिद्धिका लम्साल अहिले स्कुलले अनलाइनबाट एसइई तयारीको कक्षा लिइरहेको बताउँछिन् । तर, तयारी जति नै भए पनि मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको उनको अनुभव छ । भन्छिन्, ‘पढ्दा पनि चिन्ता नपढ्दा पनि चिन्ता । उत्साह सबै हराइसकेको छ ।’
स्कुलमा अन्य वर्षभन्दा भन्दा एसइई दिने वर्षलाई अभिभावकहरू बढी चासोको रूपमा लिन्छन् । त्यसैले यो स्थितिमा अभिभावकहरू पनि चिन्तामा देखिएका छन् ।
लोक आदर्श एकेडेमी कीर्तिपुरकी छात्रा अन्शु खरेलकी आमा लक्ष्मी बस्नेत छोरीको एसइईका कारण आफू चिन्तामा रहेको बताउँछिन् । ‘अहिले छोरीले खासै पढाइलाई ध्यान दिन सकेकी छैन । मनमा त्रास छ नि त’, लक्ष्मी भन्छिन् । यो समयमा आफूले पनि छोरीलाई पढ्न दवाब नदिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘यो बेलामा पढ्न दवाब दिए झन् समस्या हुन्छ । मैले उनले चाहेअनुसार खेल्न पनि दिएको छु ।’
यो बेलामा एसइईको कारण चिन्तामा परेका आफ्ना सन्तानलाई अन्योलमा नराख्न अभिभावकको अनुरोध छ । ‘उनीहरूलाई पढेको कुरा बिर्सिइन्छ र परीक्षा बिग्रिन्छ भन्ने चिन्ता छ । कहिले हुने हो भन्ने अन्योलले डर फैलिरहेछ । यो अन्योल सरकारले हटाइदिए हुन्थ्यो,’ एक अभिभावकले भने ।
परीक्षाको विकल्प छ ?
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय नेतृत्वको अन्योलले विद्यार्थीको मनमा त्रास उब्जाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीकै बोलीका कारण विद्यार्थीहरूलाई अन्योल भएको छ । हिजोको परम्परा धानिरहनुपर्छ भन्ने चेतना बोर्ड र सरकारमा छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो अन्योल हटाउने थुप्रै विकल्प र तरिका छन् ।’
यो संकटको बेलामा एसइई राख्नै पर्ने आवश्यकता नभएको उनको ठम्याइ छ । ‘एसइई भनेको १० कक्षा हो । हाम्रो विद्यालयको बनोटअनुसार हेर्ने हो भने ८ कक्षा आधारभूत, १२ कक्षा माध्यमिक हो । त्यसोभए कक्षा १० को परीक्षा किन लिनू ?,’ कोइराला भन्छन् । उनका अनुसार स्कुलले लिएको परीक्षामा प्राप्त नम्बर जोडेर नै विद्यार्थीलाई पास गराउँदा यो बेला उपयुक्त हुन्छ । उनी अर्को विकल्प पनि औंल्याउँछन्, ‘अहिले अलनाइनबाट व्यक्तिगत रुपमै परीक्षा दिन पाउने तरिका छ । यही प्रश्नलाई खुला मोडलबाट रिमोडलिङ गरेर जाँच लिँदा पनि हुन्छ । अर्को तरिकाचाहिँ परीक्षा नै लिनुपर्ने आवश्यक छैन । कक्षा ११ मा भर्ना हुन उनीहरूलाई रोक्नु हुन्न ।’
तर, विद्यानाथको यो विकल्प सैद्धान्तिक भएकाले व्यावहारिक नहुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल बताउँछन् । ‘स्कुलकै मूल्यांकन गरिदिए हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा भयो । बोेर्ड परीक्षाको आफ्नै नियम र कानुन छ । स्कुलले लिएको परीक्षा कहाँ छ र ? टेस्ट लिन पाइँदैन भनेर कानुनमा भनिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले टेस्ट लिएकै छैनन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘होम सेन्टर पनि सम्भव छैन । ११ हजार विद्यालयमा पुग्ने प्रहरी कहाँ छन् र हामीकहाँ ? पोहोर प्रश्नपत्र आउट भयो । त्यसैले कुनै हालतमा यो सम्भव छैन ।’
यद्यपि, कोइराला भने यो कुरामा सहमत छैनन् । ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई मैले मेरो यो कुरा राख्दा नियम परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा आयो । नियम मिच्दा अफ्ठेरो पर्छ वा आफ्नो नियन्त्रणमा बसिरहेको कुरा नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाला भन्ने होला । आँट पनि नभएको होला’, उनी भन्छन् ।
परीक्षा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘लकडाउन सकिएको केही समयपछि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । अरू विकल्प अहिले छैन ।’
शिक्षाविद् कोइराला यो बेला विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाको चिन्ता नलिन सुझाव दिन्छन् । ‘यो जाँचको निम्ति चिन्तै नगर्नुस् । एक त फेल हुँदैन । जुनसुकै ग्रेड आए पनि समस्या होइन । यो सामान्य परीक्षा हो,’ उनको सुझाव छ । परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलको पनि विद्यार्थीहरूलाई यही सुझाव छ । भन्छन्, ‘यो बेलामा स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिनुहोस् । परीक्षाको कारण चिन्तामा नरहनुहोला ।’